Sidee loo helaa warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 08/06/2021 08:54 | shirkadaha
Xaqiiqdii waad ogtahay warbixinta nolosha shaqada sifiican, ama xitaa waad waydiisatay, noloshaada oo dhan, inyar. Si kastaba ha noqotee, waxa yar oo og ayaa ah inay sidoo kale jirto shirkad warbixin shaqeed. Hadda, sidee ku heleysaa warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda?
Haddii aad tahay ganacsade ama milkiile ganacsi oo aadan weligaa hore u maqlin tan, waad xiisaynaysaa. Waan kuu sheegi doonaa waa maxay warbixin shaqo shirkadeed, sida loo helo iyo faahfaahin kale inaad maskaxda ku hayso.
1 Maxay tahay warbixinta nolosha shaqada ee shirkad
1.1 Ayaa codsan kara?
2 Warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda: waa maxay xogta ay ka kooban tahay
3 Sida loo helo warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda
4 Kawaran haddii xogta aad ka hayso shirkaddaada aysan la mid ahayn warbixinta
Maxay tahay warbixinta nolosha shaqada ee shirkad
Kahor barashada sida loo helo warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda, waxaad u baahan tahay inaad fahamto fikradeeda. Marka loo eego Lambarka Bulshada, waxaa loola jeedaa dukumiinti ay ku jiraan macluumaadka ugu muhiimsan uguna khuseeya ee ku saabsan tabarucaada Lambarka Bulshada ee shirkadaha, laakiin had iyo jeer laga soo bilaabo sanadkii la soo dhaafay.
Warbixintan waxay bilaabatay in la diro sanadka 2018, ilaa hadana sanadkasta waxaa loo diraa shirkadaha kuwaas oo dejiya degmooyinkooda iyagoo adeegsanaya Nidaamka Dejinta Tooska ah.
Ujeeddadu ma aha wax kale oo aan ka ahayn inay ka caawiso shirkadaha inay helaan macluumaadka ku habboon ee ku saabsan tabarucaadkooda, marka lagu daro fududaynta waajibaadka wax ku biirinta, bixinta macluumaadka iyo inay bixiyaan xog gaar ah oo ku saabsan qaddarka iyo xisaabinta shaqaale kasta.
Haddii aad tahay shirkad diiwaan galisay shaqaalaha sanadkii la soo dhaafay, haddii aad ku soo gudbisay kootada nidaamka Nidaamka Dejinta Tooska ah, waad awoodi kartaa inaad codsato ama aad sugto inta Lambarka Bulshada ay kuu soo dirayaan.
Warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda: waa maxay xogta ay ka kooban tahay
Sida warbixinta nolosha shaqaalaha, marka laga hadlayo warbixin shirkadeed xogtu aad ayey isugu eg tahay. Kuwani waxay u qaybsan yihiin afar qaybood:
Xogta aqoonsiga Iyagu waa macluumaadka aad ka hayso shirkadda: sabab ama lambarka aqoonsiga canshuuraha, Lambarka Liistada ugu muhiimsan, xafiiska diiwaangashan, emayl, iyo lambarrada koontada Secondary.
Xigasho xogta. Waa qaybta ugu muhiimsan maxaa yeelay waxaa ku jira dhammaan xogta xiisaha leh: degsiimooyinka la soo bandhigay; khidmadaha ay xisaabisay TGSS; saldhigyada tabaruca, ka-goynta iyo magdhawga; walxaha mushaarka la bixiyo; ajuurada la galay; xaaladda dakhliga deeqaha Lambarka Bulshada; iyo dib u dhigista kootada.
Xog kale oo ka socota CCC-da weyn. Halka nooc kasta oo macluumaad shirkadeed ah lagu xareysto iyada oo la tixraacayo Xeerka Xisaabaadka Ku-Biirinta Main Sidoo kale halkan, heshiisyada shirkaddu leedahay iyo xogta kale ee xiisaha leh ee laxiriira Main CCC (wadajirka ama iskaashi wadaagayaasha, heshiisyada wadajirka ah, iwm.) Ayaa lagu dari lahaa.
Macluumaadka sawirka. Taas oo aad ka heli doontid isbeddelka ku-darsiga Lambarka Bulshada; tirada shaqaalaha dhamaadka bil kasta iyo nooca heshiiska shaqada; mugga shaqada sida ku cad heshiiska iyo saacadaha dhabta ah. Waa muuqaal aad u muuqda maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku hesho macluumaadkaas si fudud adoo daawanaya baarka iyo jaantusyada garaafka ah ee ay ku siiso.
Dhammaan xogtaani waa inay u dhigmaan waxa aad ka haysato shirkaddaada. Xaqiiqdii, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso rikoor la mid ah warbixinta si, dhamaadka sanadka, aad u hubiso in xogta uu haysto Lambarka Bulshada ay lamid tahay tan aad gacanta ku hayso.
Helitaanka warbixinta nolosha shaqada ee shirkaddu aad ayey u fududahay in la sameeyo. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa inaad gasho shabakada sooshiyal sekuyuuritiga iyo, marka aad halkaas gaarto, Xarunta elektarooniga ee Lambarka Bulshada
Waa inaad hel qaybta "Ogeysiisyada Telematic" iyo, markaad riixeyso, raadi "Isgaarsiinta Telematic".
Warbixintu waa inay ka muuqataa meeshan waadna soo dejisan kartaa, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad gasho xiriirrada kale ee la xiriira. Haddii aadan haysan, waxaad la xiriiri kartaa Lambarka Bulshada si aad u ogaato inay dhibaato ka jirto xogta la bixiyay ama ay helaan, gaar ahaan inaad ogaato inaad si wanaagsan wax u qabanayso iyo inaanad wax dhibaato ah la kulmin.
Marka laga hadlayo isgaarsiinta, marka aad gudaha ugu jirto Xarunta Elektiroonigga waxaad ka hubin kartaa «Shirkadaha / Xiriirka iyo Diiwaangelinta / Telefoonka iyo emaylka xiriiriyaha loo shaqeeyaha si loo xaqiijiyo inay hayaan xogta saxda ah si ogeysiisyadu u yimaadaan.
Kawaran haddii xogta aad ka hayso shirkaddaada aysan la mid ahayn warbixinta
Waxay noqon kartaa kiiska, ka dib markaad ogaato sida loo helo warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda, oo aad u soo dejiso, xogta ku jirta aysan u dhigmin waxaad haysato. Taasi waa, waxaa jira sinnaan la'aan udhaxeysa. Tani maahan wax qariib ah inay dhacdo, ma ahan wax iska caadi ah, laakiin waxaa jira xaalado ay ku dhici karto.
Iyo maxaa laga yeelayaa kiisaskaas? Marka hore, Waxa ugu horreeya ee aan weydiisanno waa inaad dib u eegto xogta aad u baahan tahay si aad u ogaato inuu khalad bani'aadam jiro markaad diyaarinaysid warbixinta gaarka ah ee shirkaddaada, ama wax aad qortay khalad. Haddii kale, welina aysan u dhigmin xogta Sooshiyaal Sikiyuuriti, waa inaad heshaa wixii khalad ah oo aad xaqiijisaa inaad si sax ah uga shaqaysay dhammaan macluumaadka hay'adda.
Hadday sidaas tahay, waa inaad ballan ka sameyso Lambarka Bulshada inay soo bandhigaan kiiska iyo inay awoodaan inay saxaan macluumaadka ay u hayaan shirkaddaada.
Haddii ay khaladkaagu ahaa, sidoo kale waa inaad ballan ka samaysataa Lambarka Bulshada si aad u nidaamiso xaaladda shirkadda. Taasi waxay macnaheedu noqon kartaa inay xoogaa xayiraad ah kugu soo rogeen, laakiin haddii ay arkaan inaad si daacadnimo ku jirto ugu dhaqaaqday, wax culus oo dhacaya ma aha inay dhacaan; Hadda, haddii aadan sameyn oo ay ku ogaadaan, markaa ganaaxu wuu ka sii badnaan karaa.
Hadda oo aad wax yar ka ogaato dukumintigan iyo sida loo helo warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda, haddii aad mid leedahay, horeba waad u ogaatay waxa ay tahay inaad sameyso si aad u hubiso in xogta ay sax tahay iyo in, sidaa darteed, waxaad maamushaa shirkadda .
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Negocios » shirkadaha » Sida loo helo warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda
samee 2 maalmood
Aad ayaan u xiiseynayaa tan maxaa yeelay waxaan dhawaan ka abuuray shirkadeyda magaalada Luxembourg, shirkadan waxay ku abuurtay la talin caalami ah oo la yiraahdo Foster Swiss taas oo i siisay qorsheyn canshuuro laakiin aad baan u xiiseynayaa waxa aad ka hadlaysid.